Dhaxalka Buugga Haaneed - Qaybta 2aad - Somaliland Post
Home Maqaallo Dhaxalka Buugga Haaneed – Qaybta 2aad
Gabayga aad ka akhrisato buuggani waxa uu kuu gudbin doonaa maanso, maansaduna geeraar, geeraarkuna hees hawleedyo iyo halo kaloo badan oon halkan lagu soo koobi karin!
Waxa uu buuggu ka warramayaa “Dulmidiidka” iyo daryeel la’aanta bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxa uu cidkasta kala hadlyaa hawsha u taala iyo ta u imanaysaba. Ummadda oo dhan ayuu si gaara iyo guudba ula hadlayaa. Waxa uu cidkasta u tilmaamayaa masuuliyadda hortaala iyo waxa la gudboon.
Hibada, hal-Abuurka iyo hawraarta hodantinimadu ku duugan tahay ee Axmed Aw Geeddi maaha mid xaashi iyo kuwo kale lagu qori karo balse waa badweyn aad marba meel ka istaagayso!
Dhiganahani wuxuu ku dhaxalsiinayaa inaad ku fikirto noqoshada qof lagu soo hirto oo dadku kaga daydaan wanaagiisa. Mid lagaga daydo tirtirka saddexda madaw; Qabyaaladda, Aqoondarradda iyo Saboolnimada. Sidoo kale hawlgal iyo halgan nololeed, nabadayn iyo naruuro ifaysa, waddaniyadda iyo wehelka waddanka.Waxaa taasi sii dheer barashada deegaanka iyo dhaqanka guud ahantii, barashada siyaasadda iyo saldhigga wacyigelinta ummadda. Haaneed wuxuu ka kooban yahay 10 qormo, tobankaas qormo waxaa ka mid ah
Maansooyin halgan iyo dulmi diid
maansooyin cirbaxay iyo halmuceedyo
Qunbe malabiyo tixo qubane ah
Tix carceertiyo dhaliil tolmoon iyo maansooyin riwaayadeed
“Hasha laba nin baa lisa. Ninka dhiilka haya ayaa haaneedka taagan. Waa dhinaca mudan ee hasha laga joogsado. Timacadde waa kii lahaa, ‘Haaneednay Maandeeq Ilaah nama hungeysiine’. Halbay kalmaddaasi markii hore ku saabsanayd, markii danbena hal’abuurku gobannimadii bay u adeegsadeen. Gabayga laftiisuna wuxu kala leeyahay ‘Haaneed’ iyo ‘Miskeed’, oo waa in la haaneedo oo dhinaca tooska ah la iska taago. Ibraahin-Gadhle ayaa waxa uu yidhi: ‘Maansada abwaanoow, haaneedka mooyee, yaan miskeedka laga gelin!. Markaa magaca ‘Haaneed’ ee buuggani waxa uu u taagan yahay in suugaanta xagga toosan ee bulshada wax u taraysa laga galo oo la iska taago”. Axmed Iid Aadan
Dhiganahan waxaad kala kulmi doontaa mahadhada xilliga iyo sawrirro xasuus mudan, oo mid kastaa maalin gaara iyo ujeedkiisa lahaa. Dhiganahan waxaad ka dhex daawanaysaa in suugaanta abwaan Axmed Aw Geeddi ay leedahay Baadi-Sooc u gaar ah, isla markaana kaga duwan tahay suugaanta kale ee abwaannada.
Maansooyinka dhiganahan ku diiwaan-gashan waxaad ka dheehanaysaa aqoon aad u baaxad wayn, isla markaana ka miisaan wayn inta aad ka baratay. Buugga waxaad ugu tegi doontaa maansooyin duluc keli ah koobsanaya sida; “Shahiid dirir”, “guur”, “abaydin abaydin dhalay”, “indha daalis”, “dadku waa ilmo aadan”, “geyaan” ,“waa carruur”, “yaan iblays fooqyo kaa ridin” iyo qaar kaloo badan. Maansooyin arar kooban sida; cirjiidh, dhiigmaydh iyo roob doon. Maansooyin dulucdoodu ka mugwaytahay oo ay badan tahay isla markaana ujeedooyin badan midaynaya sida; Himilo iyo jiiftada garbadiir. Maansooyin dulucdoodu dedan tahay sida kordahab iyo hiddasan.
Maansada Kordahab waxay noqotay intii aan akhrisanayey dhiganaha Haaneed maansadii iigu yaabka badnayd, waa maanso qoto dheer oo miisaan mug wayn xanbaarsan waanay ka magac iyo muuq dheertahay maansoyinka kale. Sidoo kale waxa loo rogay (turjumay) Af-Ingiriisi. Dahabo-Cadar, Deeqa-Ladan, doobir badan, damal hadhwayn, dumar-u-roon, diric-kalkaal, deris ma-dhiba, Sama dugsada, daacad dhaba, gumaro dihin, dawlada qaran, aragti dheer,xishood qurux, dulqaad iyo dad jacayl. Intaas oo magac ah ayuu abwaanku u bixiyey maansada kordahab oo u gaar ah iyada.
Meelo badan ayuu abwaanku ka tiriyey Kordahab. Maansadan aqoonyahanno badan ayaa gorfeeyey sida; Maxamuud Sh. Axmed Dalmar iyo Kamaal Axmed Cali. Waxa uu sheegay Sh. Dalmar in Kordahab meelna lagu cayimi karin, arrintan waxa uu sii daba-dhigay oo uu yidhi” Waxay tilmaamaysaa shayga quruxda la yidhaahdo oo mar gabadha uu Kordahab u bixiyey Axmed, marna dabeecadda dhulkeenna ee hilaaca, roobka, gudgudaha, caleemaha iyo quruxdii oo marba si gooni ah loo sifaynayo. Mar kale suugaanyahanka, murti-dhaadhiga ama dhaqanruugga soomalida waxa lagu yaqaan in ay maansadoodu dhawr sifo yeelato oo sidii ninkii yidhi,” muruqa laba suulle nin ba si’ la ah.” Iyaga oo dushaa la moodayo in ay inan (gabadh) ka hadlayaan ay haddana wax ka gun dheer ama ka qoto fog ka hadlayaan.
“Maansada Kordahab waa dugsi cusub oo Ibofur u noqon kara in gabayga Soomalidu uu hannaan kii hore ka duwan u cabbiro caashaqa” Kamaal Axmed Cali.
Illayn waa Doobir269 badan
Illayn waa gumaro270 dihin
Suuraaf271 baa kuu duddee
Dabbaal 272 iyo maaha nacas
Waxaan looba duurxulayn274
Deeqdiyo quudkay275 hurtaa
Daahiyad276 weeyaan dhabeela277
Iyadu dalandool278 ma dhigin
Absuga279 waa looga digay
Daas282 iyo lacag iyo qadhiidh283
Dirhamka soof284 lagu gatiyo
Amaba demesh285 iyo xariir
Fiiro gaara: Maansadan oo dhammaystiran, sharaxeeda iyo waxa laga yidhi ugu hagaag buugga Haaneed, boggiisa 151-169